Sheeko kale: Guri Cirka! | Somaliland Today
← Shirka maalgashiga SL waxa keenay hogaaminta m/wayne Siilaanyo
Waa Maxay Duruufaha Siyaasadeed Ee Hortaagan Sadexda Musharax Ee U Taagan Doorashada Somaliland Ee 2015 Ka →
Sheeko kale: Guri Cirka!
Waxa magaalo ku noolaa nin aad u kaftan badan. Ilaa Amiirka magaaladana kaftankiisu wuu gaadhi jiray. Amiirkii magaalada ayaa dhibsaday kaftankiisii.
Amiirkii ayaa u yeedhay oo ku yidhi, ‘Nin garasho badan oo kaftan badan ayaad tahy. Adoo adeegsanaaya garashadaada waxan kaa doonayaa in aad guri cirka iiga dhisto. Haddii aad gurigaa cirka iiga dhisi weydona, waxan kugu xukumay dil.”
Ninki wuxu Amiirkii u celiyay, “Waayahay Amiir. Muddo yar isii waan kuu dhisayaa guriga-cirka eh.”
Ninki inta uu meel fadhiistay ayuu fekeray. Ka dibna talo ayaa ku dhalatay.
Meel ay ah oo magaalada duleed keeda ah ayuu tegay isaga oo sita xadhig, baaluun iyo jeris. Xidhigii ayuu labadiisii madax mid ku xidhay baaluunkii iyo jeriskii kii kalena geed.
Baaluunkii iyo jeriskii cirka ayay u duuleen; waxase gunta ka hayay geedkii. Markuu hubsaday in baaluunkii iyo jersiki cirka isku shareereen hoostana geedkii ka hayo, ayuu magaaladii ku noqoday.
Magaaladii markuu soo galay, ayuu la kulmay dadkii iyo Amiirkii oo xagii uu ka yimi eegaya. Amiirkii ayaa la hadlay oo ku yidhi, “Waa maxay sanqadha baxaysa iyo waxa duulaya ee samada isku shareeray?”
“Amiir,” ayuu celiyay, “waa gurigii aan cirka kaaga dhisayay oo laga shaqaynayo. Intii kale way dhamaatay. Saqafkii ayaa u hadhay. Saqafka shaqadiisuna ciidan badan ayay u baahantahay. Markaa, ciidan ii soo dir cirka kora oo saqafka dhisa.”
Amiirki ciidan ayuu u keen ninkii guriga dhisayay. Ciidankii ayuu kaxeeyay oo geeyay geedkii baaluunka iyo jerisku ku xidhnaa. Wuxu ku yidhi inta uu cirka farta ku fiiqay , “Waa kaa gurigii aan Amiirka cirka uga dhisayay. Xadhigaas ayaa idin genaya ee ku kora oo guriga saqafka saara.”
Nin ciidankii ka mid ah ayaa u jawaabay, “Waar yaahe waa ninka, annagu guri ma aragno aad cirka ka dhisayso; xadhig yar oo cirka lagu koraana caqli ma aha ee wax kale ma haysaa?” Ciidanka intiisii kalena ninkii u hadlay ayay hadalkii ku raacday.
“Haddii aad sidaa ku adkaysateen,” ayuu u celiyay ninkii guriga dhisayay, “Amiirkii ayaan u sheegayaa oo aan odhanayaa ciidanka way diideen in ay cirka koraan oo gurigii dhameeyaan.”
“Ina wadi waynu u wada sheegaynaaye,” ayaay ku yidhaadeen ciidanki.
Intii aanu ninkii guriga cirka ka dhisayay hadlin ayaa ninkii ciidanka afhayeenka u ahaa yidhi, “Amiir, anagu guri cirka lagaaga dhisayo maanu arag. Xadhig yar oo geed ku xidhan ayuu ninkani na yidhi cirka ku kora. Xadhig yar oo miiq ah oo cirka lagu korona maanu arag manaanaan maqal!”
Nin kale oo ciidanka ka mid ah ayaa yidhi, “Waar yaahe waa ninka sideed yara tahay? Ma wax baa ka siya?”
“Amiirka weydiiya!” Ayuu celiyay.
Amiirkina ma jawaabine wuu aamusay!!!
Abdisalam Mohamed <prof.abdisalaam@gmail.com